हेटौंडामा घट्यो अनौठो घट्ना, पुरुषलाई नै …. – Kavrepati
Home / रोचक / हेटौंडामा घट्यो अनौठो घट्ना, पुरुषलाई नै ….
admin September 14, 2021	रोचक Leaveacomment 82 Views
पूर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा–२, सरस्वती टोलमा एक पुरुषले अर्का पुरुषमाथि कर णी गरेको आरोप लागेको छ । गत शनिबार साँझ टोलमा स्थानीय ३४ वर्षीय युुवाले छिमेकीको बारिमा गाउँकै ३२ वर्षीय एक पुरुषको गु’द’द्वा’र’मा कर णी गरेको आरोप लागेको हो । उजुरीपछि प्रहरीले पीडित आरोपीलाई पक्राउ गरी आइतबार बयान लिएको छ ।
आइतबार दिउँसो नै पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा जाहेरी दिएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक। प्रवक्ता देवेन्द्र दासले पीडित पक्षले जाहेरी दिएकाले उक्त मुद्धा अघि बढ्ने बताउनुभयो । मुलुकी अ’प’राधसं’हिता, २०७४ अनुसार उक्त कार्य दो’षभित्र पर्दछ ।
अ’प्रा’कृ’ति’क मै’थु’न’प’छि शा’री’रि’क’रुपमा पी’डामा परेका पी’डितलाई स्थानीयले उपचारका लागि शनिबार राति हटौंडा अस्पताल ल्याएका थिए । स्थानीय भन्छन्–उक्त दिन गाउँमा साँझ तीजको नाचगान थियो । दुई पुरुष एकान्तमा मोबाइलमा अ’श्ली’ल भि’डियो हे’र्न ब’सेका थिए । भिडियो हेर्ने क्रममा उक्त घटना घटेको र आफूलाई असहज भएको पीडितले बताएपछि उनको स्वास्थ्यमा समस्या भएको जानकारी पाएपछि राति नै एम्बुलेन्समा हेटौंडा अस्पताल ल्याइएको थियो ।
अस्पतालले घटनाबारे जानकारी लिएपछि प्रहरीबाट अनुमति नपाएसम्म उपचार अघि बढाउन नसकिने बताएपछि स्थानीय राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा पुगेका थिए । हाल पीडितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Previous प्रियंका र निकले किने नयाँ घर
Next पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, ३० गते बुधबार , आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल